प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - Chuzhou Meiko Magnetics Co, Ltd.
कस्तो प्रकारको चुम्बकीय उत्पादनहरू हामी मेिको म्याग्नेटिक्सबाट प्राप्त गर्न सक्दछौं?
मीको चुम्बकीयचीनमा एक पेशेवर र अग्रणी चुम्बकीय उत्पादन निर्माता र निर्यातक हो। हाम्रो उत्पादनहरू बेअर्ड नियोडियमियम म्याग्नेटबाट सम्बन्धित चुम्बकीय सम्मेलनमा विभिन्न आकारहरू, प्रकार्यहरू र अनुप्रयोगहरूमा छन्। २००० भन्दा बढी प्रकारका चुम्बकीय वस्तुहरू वैकल्पिक हुन्।
तपाइँको चुम्बकको गुणस्तर कस्तो छ?
हामी संग उच्च-योग्य चुम्बकीय उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न कोशिस गरिरहेका छौं एक वर्ष ग्यारेन्टी, कुनै पनि कृत्रिम र गिरावट हानिकारक बाहेक। हामी हाम्रो सामग्री र कारीगरी को वारेन्टी दिन्छौं। हाम्रो प्रतिबद्धता हाम्रो चुम्बकीय आईटमहरूको साथ तपाईंको सन्तुष्टि हो। वारेन्टीमा वा नहोस्, सबैको समाधानका लागि सबै ग्राहकहरूको समस्याहरू समाधान गर्न यसलाई समाधान गर्न हाम्रो कम्पनीको संस्कृति हो।
हाम्रा मूल्यहरू आपूर्ति र अन्य बजार कारकहरूको आधारमा परिवर्तनको अधीनमा छन्। तर हामी चीनमा आधारित चुम्बकीय उत्पादनहरू म्याफ्याक्चररको रूपमा उत्पत्ति भएका छौं, हामी तपाईंको लागत बचत गर्नका लागि धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
हो, हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय आदेशहरू आवश्यक छ चल न्यूनतम अर्डर मात्रा। तर यदि स्टकमा मानक आकार वस्तुहरू, त्यहाँ प्रारम्भिक अर्डरको लागि MOQ छैन। थप विवरणहरूको लागि, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
हो, हामी परीक्षण रिपोर्ट, विश्लेषण / कन्फरेन्सको प्रमाणपत्र, बीमा, उत्पत्ति, र अन्य निर्यात कागजातहरू आवश्यक सहित अधिकतर कागजातहरू प्रदान गर्न सक्दछौं।
सामान्यतया ढुवानीको लागि -15-१-15 दिनमा। यदि मानक वस्तुहरूमा, हामी तिनीहरूलाई days दिनमा दिन सक्दछौं। नयाँ नमूनाहरूको लागि, नेतृत्व समय लगभग days दिनहरू हुन्छ। सामूहिक उत्पादनको लागि, नेतृत्व समय जम्मा भुक्तानी प्राप्त गरेपछि २०--30० दिनहरू हुन्छ। नेतृत्व समय प्रभावी हुन्छ जब (१) हामीले तपाईंको निक्षेप प्राप्त गर्‍यौं, र (२) हामीसँग तपाईंको उत्पादनहरूको लागि अन्तिम स्वीकृति छ। यदि हाम्रो नेतृत्व समय तपाईंको डेडलाइनको साथ काम गर्दैन भने, कृपया तपाईंको बिक्रीको साथ तपाईंको आवश्यकताहरू माथि जानुहोस्। सबै केसहरूमा हामी तपाईंको आवश्यकताहरू समायोजन गर्न प्रयास गर्नेछौं। धेरै जसो केसहरूमा हामी त्यसो गर्न सक्षम हुन्छौं।